ရောင်စုံဘောလုံး ကြက်သားနှင့်ဟင်းရွက်စုံဟင်း | Wutyee Food House
« ပုဇွန်လုံး ချိုချဉ်ကြော်
တို့ဟူးသုပ်လေး လုပ်စားကြအောင် »
November 3, 2010 by chowutyee ရောင်စုံဘောလုံး ကြက်သားနှင့်ဟင်းရွက်စုံဟင်း
အင်တာနက် မရတာနဲ့ ဟင်းသစ် မတင်ဖြစ်တာ ကြာသွားပါတယ်။ ခုမှပဲ ရတုန်း မြန်မြန် တင်ဖြစ်တာပါ။ ဒီဟင်းလေးကတော့ ကြက်သားနှင့် ဟင်းရွက်များကို ဘောလုံးပုံ အလုံးလေးများ လုပ်ပြီ ချက်ပြုတ်ထားမို့ အလွန်ထူးခြားပြီ စားလို့လည်း အရမ်းကောင်းပြီ ဟင်းသစ်တမျိုးဖြစ်ပါ။ တူတူလုပ်စားကြည့်ရအောင်… ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၁။ ကြက်သား – ၂၀ကျပ်သား (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၂။ ကြက်သွန်နီ – ၂လုံး (အတုံးလေးများတုံးပါ)
၅။ မုန်လာဥနီ – ၁ခု (အလုံးလုပ်တံဖြင့် အလုံးလေးများ လုပ်ပါ)
၆။ ဂေါ်လခါးသီး – တစိတ် (အလုံးလုပ်တံဖြင့် အလုံးလေးများ လုပ်ပါ)
၇။ အားလူး – ၂လုံး (အလုံးလုပ်တံဖြင့် အလုံးလေးများ လုပ်ပါ)
၈။ ရွှေဖရုံသီး – တစိတ် (အလုံးလုပ်တံဖြင့် အလုံးလေးများ လုပ်ပါ)
၉။ ငုန်းဥ – ၆လုံး (ပြုတ်ပြီ အခွံနွာထားပါ)
၉။ ကြက်သွန်မြိတ် – တစည်း
၁၀။ ပဲငံပြာရည် အနောက် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
၁၁။ ဆား ၊ ကြက်သားမှုန့်
၁၂။ နှမ်းဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၁၃။ ခရုဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ နှုတ်နှုတ်ဆင်းထားသော ကြက်သား၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ နှမ်းဆီ၊ ဂျုံ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း) အားလုံးတို့ကို ရောနယ်ပြီး အလုံးလေးများလုံးလိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်ပြီး ကြက်သားလုံးများထည့် အညှိရောင်သန်းလာသည် အထိကြော်ပေးပါ။
၃။ ကြော်ပြီးလျှင် ဇကာဖြင့် ပန်းကန်ပြားတစ်ခုထဲ ပြန်ဆယ်ထားပါ။
၄။ ဒယ်ထဲ ဆီ (စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း) ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းကို ဆီသပ်ပေးပါ။
၅။ ပြီးမှ အတုံးလေးများတုံးထားသော ကြက်သွန်နီကို အညှိရောင်သန်းလာသည် အထိ မွှေပေးပါ။
၆။ ပြီးလျှင် မုန်လာဥနီ၊ ဂေါ်လာခါးသီး၊ ရွှေဖရုံသီး၊ အားလူး လုံးလေးများကို ထည့်၍ ရေတစ်ခွက်ခန့်ထည့် တည်ထားပေးပါ။ ဟင်းရွက်များ နူးသည်အထိ နောက်တစ်ရေ ထပ်ထည့်တည်ပေးပါ။ ၇။ ထို့နောက် အရသာအပေါ့ အငံအတွက် ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ကြက်သားမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ နှမ်းဆီ ထည့်မွှေပေးပါ။
၈။ နောက်ဆုံးမှ ကြော်ထားသော ကြက်သားလုံးများ နှင့် ငုန်းဥကို ရောမွှေလိုက်ပါ။
၉။ ကော်မှုန့်(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)ကို ရေအနည်းငယ်ဖြင့် ရေမွှေပြီ လောင်းချပြီ မွှေလိုက်ပါ။ ၁၀။ ရောင်စုံဘောလုံး ကြက်သားလုံး နှင့် ဟင်းရွက်စုံကြော်ကို စားသုံးနိုင်ပါပြီး….
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 15 Comments	15 Responses
on November 3, 2010 at 11:31 am | Reply Nai
Well done Wutyee. Veggies look cute. I need to buyascoop to cook this dish…
on November 4, 2010 at 1:53 am | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် မနိုင်ရေ အလုံးလေးတွေ လုပ်ဖို့ Scoop တံလေးတော့ ၀ယ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအတံလေးက တော်တော် အသုံးဝင်တာ။ သစ်သီးတွေလည်း Design ဖော်လို့ရသေးတယ်..😛
on November 3, 2010 at 2:29 pm | Reply Lace
very cute and attractive dish.🙂 thanks for posting it.I will try to cook like that …
on November 4, 2010 at 1:55 am | Reply chowutyee
Thanks Lace! Plz try it.. It is really nice dish!😀
on November 3, 2010 at 5:35 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
on November 4, 2010 at 2:00 am | Reply chowutyee
မချောရေ စားလို့တကယ်ကောင်းတယ် သိလား။ ကျေးဇူးပါနော်….
on November 4, 2010 at 10:17 am | Reply hmone
good job pig yee…..i wanna try too but lazy to do ballon hee so wait for you to cook for me😉 wanna eat now
on November 7, 2010 at 1:14 pm | Reply chowutyee
ကိုယ်ကလည်း scoop တံလေးနဲ့လုပ်ရင် မခက်ပါဘူး လွယ်လွယ်လေးရယ်..
on November 4, 2010 at 10:25 am | Reply suakayi
ma pls show me အလုံးလေးတွေ လုပ်ဖို့ Scoop တံလေး photo…i don’t know this scoop…wanna buy…thank u for ur dish….look delicious n beautiful…
on November 7, 2010 at 1:11 pm | Reply chowutyee
suakayi ရေ Scoop တံလေးကို ရိုက်ပြီ နောက်နေ့ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်။ လုပ်စားကြည့်ပါ တကယ်ကောင်းတယ်..😛
on November 9, 2010 at 8:19 am | Reply suakayi
i wiill try….Thanks ma …🙂
on November 10, 2010 at 3:36 am | Reply winle
i also want to see scoop n how to make ball .
on July 26, 2011 at 12:41 pm | Reply phyo pa pa
ချိုရေ Scoop တံလေး ပြပေးပါဦးနော်
on February 22, 2012 at 10:04 am | Reply သင်းသင်း
မ၀တ်ရည်…သင်းသင်းscoopတံဝယ်တာမရဘူး…city mart မှာမရှိဘူး…ဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲဟင်…ပြောပေးနော်…
on February 25, 2012 at 6:15 pm | Reply chowutyee
သင်းသင်းရေ scoop တံကို သံဈေးမှာ ရောင်းတယ်။ သံဈေးရှေ့က စတီဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလည်း ၀ယ်လို့ရတယ်…🙂